मुटुरोगी पार्वतीको पीडा : ६ लाख उपचार खर्च कहाँबाट ल्याउनु ? - Nepal Sanchar
बैतडी, ९ कात्तिक । पाटन नगरपालिका–५ बसन्तपुरकी ४८ बर्षीया पार्वती ठगुन्ना एक वर्षदेखि मुटुरोगबाट पीडित छिन् । गंगालाल हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंका अनुसार पार्वतीको मुटुको तीन वटा भल्ब फेर्नु पर्छ । यसका लागि करिब ६ लाख रुपैयाँ र चार जना रक्तदाता ल्याउन अस्पतालले भनेको छ । तर उनीसँग न रगत दिने मान्छे नै छन्, न अस्पतालले भने जति पैसा नै छ । उनी पाँच हजार रुपैयाँ बोकेर मुटुको अप्रेशन गर्न बैतडीबाट काठमाडांैतर्फ लागेकी छिन् । यो पैसाले उनी काठमाडौंसम्म पुग्ने टिकट पनि पाउदिनन् ।
उनीसँगै पति जनक पनि छन् । ६४ बर्षीय जनकको पनि मुटुमा समस्या छ । गाउँघरमा सिलाई पेशा गरिरहेका जनक दम्पतिका ६ छोरी र ६ बर्षका एक छोरा छन् । सिलाईको आम्दानीले परिवार पाल्नै मुस्किल छ अब उपचारका लागि आवश्यक ६ लाख कहाँबाट जुटाउने ?
१३ लाख ऋण
जनक–पार्वती दम्पतिले हालसम्म उपचारमा निकै नै खर्च गरिसकेका छन् । भएभरको खेतबारी बेचिसकेका छन् भने थप १३ लाख ५० हजार ऋण लागेको छ । जनकले भने, ‘श्रीमतीलाई बैतडी, डडेल्धुरा, धनगढीदेखि काठमाडौंसम्मका धेरै अस्पतालमा पुर्याए , उपचार खर्च होटलको बसाइ, यातायात खर्च गरेर लाखौं खर्च भैसकेको छ । अझ अप्रेशन खर्च ६ लाख लाग्छ भनेको छ ।’ उनीहरूको काठमाडौंमा कोही आफन्त छैनन् । कहाँ बस्ने के खाने ? भगवान भरोसेमा काठमाडौ जान लागेको उनीहरू बताउँछन् । सांग्रीला बैंकबाट ६ लाख, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट तीन लाख र गाउँघरबाट चार लाख ५० हजार ऋण निकालेको उनले बताए ।
मुटुरोग पीडित पार्वतीले भक्कानिदै भनिन् ‘मलाई बाँच्ने आशा निकै कम छ । घरमा १२ बर्षदेखि २० बर्षसम्मका ६ छोरी छन् । ६ बर्षको एक छोरा छ । दुबै बुढाबुढी बिरामी छौं । सात छोराछोरी टुहुरा भए भने कसले हुर्काइदेला ? रातदिन रोएरै बिताउँछौं । आफु मुटुको बिरामी छु, काम केहीँ गर्न सक्दिन ।’
गत ०७७ माघमा पार्वती बिरामी परेर १५ दिन थला परिन् । उनलाई स्थानीय मेडिकल र जिल्लाका पोलिक्लिनिकहरूमा लगियो । पछि जिल्ला अस्पताल हँुदै डडेल्धुरा अस्पताल, धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पताल पुर्याएको पति जनकले बताए । अन्तमा काठमाडौं लगेपछि रोग पत्ता लागेर उपचार सुुरु भयो । अहिले पनि उनको शरीर झम्झमाउने, हिँडडुल गर्न नसक्ने, धेरैबेर उभिन नसक्ने, शरीर दुखीरहने, सास फेर्न गाह्रो हुने, हातखुट्टा सुनिने गर्छ । उपचार गरौं पैसा छैन्, लाखौँ ऋण लागिसक्यो, उपचार नगरू छोराछोरी कसले पालिदेला ? उनीहरूकै चिन्ता छ ।’ पार्वतीले भनिन्, ‘छोरा १५ बर्षसम्मको भइदिएको भए केही आशा हुन्थ्यो अब के गरू ? कोही सहयोग गर्ने भैदिए बाच्थेँ की ।’
मुटुरोगी पार्वतीको परिवारलाई पाटन नगरपालिकाले १५ हजार सहयोग गरेको छ । विपन्नताका कारण एक लाख रुपैयाँ उपचार शुल्कमा छुट गरिदिन सिफारिस गरेको पाटन–५ का वडा अध्यक्ष फुनिसिंह बोहराले बताए ।